Izimali zotshalomali | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Ukuvezwa okukhulu kwezimali zokutshala imali
Izimali zamazwe ngamazwe zishintsha ukuthambekela kwezinyanga zakamuva ngesifiso sabatshalizimali sokulondoloza imali yabo.
Izimali ezihlanganyelwe ze-Global equity vs amamodeli axubekile
Izimali zomhlaba wonke ziyizimali eziguqukayo zokutshala imali ezingagcini ngokulinganiselwa endaweni eyodwa, kepha ngokuphambene ngeziningi.
Kufanele kube yini ukwakheka kwephothifoliyo yethu yesikhwama sokutshala imali?
Ukuze ungabi nezinkinga ekuphatheni iphothifoliyo yakho elandelayo yesikhwama sokutshala imali, sizokweluleka ukuthi wenze iphothifoliyo eyisisekelo.
Ezinye izimali zokutshala imali ukwenza imali oyongile izuze
Izimali zokutshala imali zingenye yemikhiqizo abatshalizimali abancane nabaphakathi abakhethwa kakhulu njengethuluzi lezimali zoTshalomali ngomunye wemikhiqizo iningi labo abatshalizimali abancane nabaphakathi abakhethwa kakhulu njengethuluzi lokwenza inzuzo yabo ibe nenzuzo.
Izimali zotshalo-mali ezihlanganiswe ezimalini zihlinzeka ngochungechunge lwezinzuzo ezingaba mnandi kakhulu.
Ukwehlukahluka kwiphothifoliyo yezimali zokutshala imali
IZikhwama Zikazwelonke Zotshalomali zibhalise ukuqala okuhle kakhulu konyaka ochungechungeni lwezomlando, ngenzuzo enqwabelene engu-3,3% kuyo yomibili. Enye yezikhiye zokuvikela ukonga kwethu ekungenzekeni okungaba khona ezimakethe zezimali kusekelwe ekuhlukaniseni okuqukethwe kwayo
Umehluko phakathi kwe-mutual Funds ne-ETFs?
Uma kunemikhiqizo emibili egcina ukufana okuthile phakathi kwayo, lezi ngokungangabazeki izimali zokutshala imali kanye ne-ETFs, eyaziwa kangcono njengesikhwama Uma kunemikhiqizo emibili egcina ukufana okuthile phakathi kwayo, lezi ngokungangabazeki izimali zokutshala imali kanye nama-ETF aziwa kangcono njengokushintshaniswa izimali -raded
Kuyini ukuvela kwezimali zokutshala imali?
Izimali zombili ziyindlela ephephile nenenzuzo yokutshala imali nokwenza imali enenzuzo uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zotshalo-mali. Ikakhulu, izimali ezihlanganyelanayo ziyindlela ephephile nenenzuzo yokutshala imali nokwenza imali enenzuzo uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zotshalo-mali.
Izimali zokutshala imali zamaKatolika, kungani kungenjalo?
Ngokufakwa kwalo mkhiqizo omusha we-Invesco kulo nyaka, sekuvele kunezimali eziningana esezenziwe izinkampani zabaphathi ezilawulwa yimigomo Ngokufakwa kulo nyaka umkhiqizo omusha we-Invesco, sekuvele kunezimali eziningana esezilungiselele abaphathi izinkampani ezilawulwa yimigomo nezindinganiso zokuziphatha ezivikelwe yiSonto LamaKatolika
Izindlela zokwakha isikhwama sokutshala imali esinenzuzo
Unyaka we-2018 ubungunyaka onzima kakhulu emakethe yamasheya yaseSpain ngokuwa okusondele ku-15% ku-Ibex 35, okuyisibalo esibi kakhulu eminyakeni yamuva. Yize esinye sezihluthulelo ezisetshenziswa ngabaphathi bakazwelonke nabamazwe omhlaba sincike ekubhekiseni amanani esitokwe anciphise amanani kakhulu ngo-2018
Umbono wemali engenayo ongaguquguquki walo nyaka
Okunye okulahlekile okukhulu onyakeni odlule ngokungangabazeki kube yimikhiqizo etholakele yemali engenayo engaguquki enikeze imbuyiselo engeyinhle
Yiziphi izimali ezingaziwa kancane?
Izimali zokutshala imali zingenye yamathuluzi athandwayo kubatshali bezimali abaningi abancane nabaphakathi. Njengezimali ezingezansi ezitshaliwe zokutshalwa kwezimali zingenye yamathuluzi ancanyelwayo kubatshalizimali abaningi abancane nabaphakathi
Ngabe uyazi ngempela izimali zokutshala imali oziqashile?
Izimali zokutshala imali zingenye yemikhiqizo ekhethwayo yabasebenzisi bezezimali. Ngaphezu kokulula ukubhalisa, bajoyine kulokhu Izimali zotshalo-mali zingenye yemikhiqizo ekhethwayo ngabasebenzisi bezezimali ngobulula bayo bokubhalisela
Ungasikhetha kanjani isikhwama sokutshala imali
Imikhakha eminingi yokutshalwa kwemali ithumele ukuphuma okuphelele ngoNovemba. Lesi sigaba siholwa yiZimali Ezihlanganisiwe, ezazithola ukubuyiselwa kwemali Enye yezinto okufanele uzinake lapho ukhetha umkhiqizo walezi zici uhlobo lokuphatha olwenziwa kulo
Abasebenzisi bayeke izimali zokubambisana: ukuhlengwa okuningi
Izimali ezihlanganyelanayo akuwona umkhiqizo wezezimali ohamba ngezikhathi ezinhle kakhulu. Uma kungenjalo, kunalokho, futhi ngokuya ngemininingwane eminingi kusobala ukuthi ukubuyiselwa kwemali abanikazi babo abanika ukuhleleka kufinyelela kumazinga angakaze abonwe eminyakeni yamuva
Ungayonga kanjani imali ngezimali zesikhwama?
Enye yezingqinamba ezinkulu lapho kuqashwa izimali zokutshalwa kwemali amakhomishini abanikazi bawo okufanele babhekane nawo. Akumangalisi ukuthi lolu hlobo lweNye yezingqinamba ezinkulu lapho kuqashwa izimali zotshalomali amakhomishini abanikazi bawo okufanele babhekane nawo
Ziyini izimali zokutshala imali?
Kulezi zinsuku sibona ukuthi omunye wemikhiqizo yezezimali evelayo kakhulu ubizwa kanjani ngokuthi yimali yesikhwama sokutshala imali. Kepha siyazi ngempela? Kulezi zinsuku sibona ukuthi omunye wemikhiqizo yezimali evelayo kakhulu ungakanani okuthiwa yimali yesikhwama sokutshala imali
Kungani izimali ezihlanganisiwe zingaba ngenye indlela yokutshala imali?
Omunye wemikhiqizo ehlukahlukene kakhulu ongayithola okwamanje yizimali ezihlanganisiwe zokutshala imali
Iyini imali esebenzayo futhi isetshenziswa kanjani enkampanini yakho?
Imali yokusebenza yaziwa nangokuthi isikhwama esijikelezayo noma ezimeni eziningi njengemali yokusebenza, ngesiNgisi ibizwa ngokuthi yi-Working Capital
Ukukhuluma ngokuqinile i-ETF yi-Exchange Traded Fund, futhi bachazwa njengesikhwama sezinkomba ezithengiswayo, kepha yini lokhu? Izimali zezinkomba
Intela yesikhwama sokutshala imali
Njengoba ukwazi ukubona, izimali ezihlanganyelanayo zisuselwa ezimisweni eziyisisekelo futhi zinikeza ukufinyelela okulula nokuqeqeshiwe ezinhlotsheni ezahlukahlukene zempahla.
Imali engenayo engaguquki namanani
Imiqondo emibili esizoyithola kaningi yiNkokhelo Engaguquguquki kanye neNgeniso Eguqukayo, kufanele sicacise ngale mibono elandelayo
Izimali zokutshala imali eziqinisekisiwe
Izimali zokutshala imali eziqinisekisiwe, imvamisa kufanele ziphendule kwiphrofayili ethile abantu abaningi abangenayo, futhi okwamanje kunzima kakhulu
Izimali zilahlekelwa yimali, kungani ungakhethi okusele?
Izimali zokutshala imali azihambi ngesikhathi esimnandi futhi kuzofanele ukhethe amamodeli aguquguquka kalula, uyazi ukuthi ayini?
Ukudluliswa kwemali esikhwameni sokutshala imali, ungazuza kanjani?
Ukudluliswa kwemali esikhwameni sokutshala imali kungaba umsebenzi ozuzisa kakhulu izintshisekelo zakho, ngokuvuselela izimpahla zezimali.
Izimali zokutshala imali ezisuselwa ku-Eurostoxx-50
I-eurostoxx iyinkomba yomhlaba wonke yaseYurophu lapho izimali eziningi zokutshalwa kwezimali zisekelwe khona.Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini izici zayo?
Uyazi ukuthi yiziphi izinkomba zezimali eziqukethe?
Inkomba yezimali ezihlanganyelwayo zilandelela ngqo enkombeni yesitoko, futhi azinikezi ukuphambuka ekusebenzeni, ohlangothini olulodwa noma kolunye.
Kudinga lonke ulwazi mayelana nezimali zokutshala imali
Ukucacisa ukungabaza okuvelayo lapho ubhalisa isikhwama sokutshala imali, kufanele uqoqe imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka ngale mikhiqizo yezezimali.
Ungayonga kanjani imali ngezimali zokutshala imali?
Izimali zokutshala imali aziwona nje umthombo wokwenza ukonga kube nenzuzo, kepha ukukhiqiza ukonga okukhulu kuma-akhawunti wakho
I-ETF vs Amasheya - Izinzuzo Nezinkinga Zombili
Uma kukhulunywa ngokutshala imali kwiStock Market, kunabantu abakhetha ukukwenza ngqo ngokuthenga amasheya ngenkathi ...